Khilaafkii ka dhex taagnaa baarlamaanka maamulka Somaliland oo maanta go’aan laga gaarayo – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Khilaafkii ka dhex taagnaa baarlamaanka maamulka Somaliland oo maanta go’aan laga gaarayo
Waxaa maanta la filayaa in magaalada Hargeysa ee maamulka Somaliland lagu qabto kullan aan caadi ahayn oo la isugu keenayo xubo ka kala socda guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka Somaliland Baashe Maxamed Faarax iyo C/raxmaan Maxamed Tanyanle oo guushiisa weli muran ka taagan yahay.
Xubnahaasi ayaa waxaa mid walba laga doonayaa inuu keeno caddeeymo ku aadan cida sida rasmiga ah ee ku guuleysatay xilka guddoonka baarlamaanka maamulka Somaliland.
Kullankaasi oo ay garwadeen ka yihiin siyaasiyiin ka tirsan maamulka Somaliland ayaa waxyaabaha ugu weyn ee diiradda lagu saari doonno ka mid ah, khilaafka ku aadan doorshadii guddoonka sare ee baarlamaanka maamulkaas oo weli muran ka taagan yahay.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Somaliland oo warbaahinta la hadlay ayaa u sheegay inay codkooda siiyeen C/raxmaan Maxamed Tanyanle.
Buuq iyo muran ayaa ka dhashay kadib markii shir guddoonka baarlamaanka Somaliland uu shaaciyay in Baashe Maxamed Faarax uu hal cod tartanka kaga guuleystay musharaxii kale ee C/raxmaan Maxamed Tanyanle.
Labada musharax ayaa sida la sheegay kala helay 38 iyo 39 cod.
Baashe Maxamed Faarax ayaa helay 39 cod, halka C/raxmaan Maxamed Tanyanle la sheegay inuu isna helay 38 cod.